Ogaden News Agency (ONA) – OYSU-Kenya oo shir isugu yimid xarunta Nairobi iyo xerada qaxootiga Kakuma ay ugu codeynayaan Xoghayaha guud ee ururka
Doorashada oo ahady mid siwayn loo so abaabulay ayaa waxaa ka soo qeyb galay dadkii loogu talagalay oo halkaasi ka dhiibtay cod bixin toodii si ay u doortaan hogaanka guud ee urur waynaha OYSU majaraha uqaban doona. Shirkan oo ka dhacayNairobiayaa waxaa si habsamile u daadihinayey xoghayaha OYSU ee BarigaAfricahalgame Faysal Cabdi.
Shirka doorashada ah ayaa waxaa laga akhriyay cv-ga musharaxiinta u sharaxnaa xilka xoghaynta heer caalami ee oOYSU kuwaasi oo kala ahaa halgame Cabdiaziis Adan Xasan iyo halgame Mujaahid Sheekh Ibraahim Cabdala.
Doorashada maanta oo ku dhacaday qaab gacantaag aheyd ayaa waxay gudiga doorashadu sheegeen in natiijada doorashada ay u gudbiyeen shirweynaha ururka OYSU heer caalami halkaasoo laga sheegi doono cida ku guuleysatay jagada Xoghaynta guud ee OYSU.
Waxaa sidoo kale shir ku qabtay xerada Qaxootiga ee Kakuma/Kenya dhalinyarada OYSU. Shirka oy ka soo qaybgaleen dhamaan xubnaha ururka ayaa waxaa furay xoghayaha OYSU ee xerada qaxootiga Kakuma halgame Cabdifataax oo si fiican oo xogwaramay xaaladaha halganka iyo qaybta ay dhalainyarada ka qaadanayaan halganka socda. Shirka oo socday laba saacadood ayaa ku soo afjarmay jawi farxal leh iyo guul.